ပထမဆုံး အကြိမ် ချိန်းတွေ့တာ အောင်မြင်ဖို့ အတွက် အချက် ၁၀ ချက် – Gentleman Magazine
ချိန်းတွေ့ရင်လုပ်ရမယ့် အရာတစ်ချို့ဟာ သိပြီးသားတွေပါပဲ။ ဥပမာ မိန်းကလေး ၉၅% လောက် သူတို့ ရုပ်ရည်ကို ချည်းမွန်းစေချင်ပါတယ်။ ဒီလုိုပဲ ချိန်းတွေ့တဲ့နေ့မှာ ဖုန်းဆက်ပြီး နေရာနဲ့ အချိန် သတိပေးတာကို လိုချင်ပြီး စားသမျှကို လည်းယောက်ျားလေးက ရှင်းပေးစေချင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် စားသောက်ဆိုင်ရွေးချယ်မှု ၊ရှပ်အင်္ကျီအရောင် စတဲ့ အခြားသောအရာများစွာက သင်နောက်ထပ် ချိန်းတွေ့ခွင့် ရှိမရှိကို အဆုံးအဖြတ်ပေးနိုင်ပါတယ်။
၁။ ရှပ်အကျီ ရဲ့အစွမ်း – ရှပ်ဝတ်ထားတဲ့လူက ရင့်ကြပ်ထက်မြတ် တယ်ထင်ရပြီး အမျိုးသမီးများလွန်စွာသဘောကျပါတယ်။
၂။ နေသာတဲ့နေ ရွေးပါ – မိန်းခလေးများဟာ ရာသီဥတုသာယာနေရင် ချိန်းတွေ့တာကို ပိုမို လက်ခံတက်ကြပါတယ်။ မိုးအုပ်နေတဲ့နေ့တွေကို ရှောင်ပြီး ချိန်းဖို့ပြောပါ။
၃။ စကားသံကို နားထောင်ပါ – သူမက စကားကျယ်ကျယ်ပြောတက်တယ် . ပြတ်ပြတ်ပြောတက်တယ်ဆိုရင် ပွင့်လင်းသူမို့ လူအများကြားမှာသွားရတဲ့ ပန်းခြံတို့ . ရှော့ပင်စင်တာတို့မှာချိန်းပါ။
သူက စကားဖြေးဖြေးပြောတယ်၊ အေးအေးလေးနေတက်တယ်ဆို ရင် သူကရှက်တက်သူမို့ လူမရှုပ်တဲ့ ကော်ဖီဆိုင်တို့၊ ရုပ်ရှင်ရုံတို့မှာချိန်းပါ။
၄။ ခမ်းနားသော နေရာ – အမိုးနိမ့်သောနေရာများကို ရှောင်ပါ။ သူမကို စိတ်ကျည်းကျပ်စေပြီး ပွင့်လင်းစွာပြောဆိုရန် ခက်ခဲစေပါတယ်။ ခောင်မြင့်သောနေရာများ က လူရဲ့စိတ်ကိုလွပ်လပ်မှုပေးတဲ့ အတွက် သူမ လွပ်လပ်စွာ ပြောဆို ဆက်ဆံနိုင်မှာပါ။
၅။ မှန်သော မေးခွန်းမေးပါ – “ပြည်တွင်းပြည်ပ ဘယ်တွေ လျှောက်လည်ဖူးသလဲ”
“သရဲကား ကြိုက်လား” နဲ့ “ရွေးချယ်ခွင့် ရှိမယ်ဆို ဘယ်နိုင်ငံ ဘယ်မြို့မှာ နေချင်သလဲ” စတဲ့မေးခွန်းတွေကို အရံအနေနဲ့ထားပါ။
၆။ ကိုယ်ရေးကိုယ်တာ နဲနဲပဲပြောပါ – သူပြောတာအကုန်နားထောင် ခောင်းညိတ်နေတာထက် ကိုယ် မိဘအကြောင်း . ကိုယ့် အလုပ်အကြောင်းနဲနဲ ပြောပေးပါ။ သူ့အကြောင်း ကိုယ့်အကြောင်း ဆက်စပ်မိအောင်လို့ပါ။ သူလည်းကြုံနေရတာကို ရွေးပြောပါ။ ဒါမှ သူ နဲ့ကိုယ် ဖြစ်စဉ် တူတယ်ဖြစ်ပြီး စိတ်ထဲကျန်ခဲ့မှာပါ။
၇။ အရမ်းဂရုမစိုက်ပါနဲ့ – အစပိုင်း ဂရုအရမ်းစိုက်ပြရင် မိန်းကလေးတွေက သိပ်ပိုတယ်ထင်ပြီး မကြိုက်တော့ပါဘူး။ ကိုယ့်အပြုအမူ ကိုယ်ပဲ ထိန်းထားပါ။ ပိုချင်ရင် နောက်မှ ပိုလို့ရတယ်. မဟုတ်ရင် ကိုယ်ပဲ သူ့အတွက် လူပိုဖြစ်သွားမယ်။
၈။ ဖုန်းမသုံးပါနဲ့ – ဖုန်းသုံးခြင်းအားဖြင့် သူနဲ့ စကားပြောမယ့်အချိန်တွေ ကိုဖြုန်းတီးရာရောက်တဲ့အပြင် သူ့ကိုလည်း အလေးမပေးရာရောက်တဲ့အတွက် ဖုန်းကို အိပ်ကပ်ထဲသိမ်းထားပါ။
၉ ။ ဖြတ်ပြီးပြောပါ – သူစကားကို ဖြတ်ခိုင်းတာမဟုတ်ပါဘူး။ သူစကားပြောတာကို ဝင်ထောက်ခံပေးတာကိုပြောတာ။ နားထောင်နေရုံနဲ့ သူပြောသွားတာ ပဲရှိမယ်. သင်ဂရုတစုိုက်နားထောင်နေတာသိအောင် ဖြတ်ဖြတ်ပြီး နားလည်ကြောင်းပြောပါ။ ရွှဲ့သလိုဖြစ်သွားအောင် ခဏခဏတော့မလုပ်နဲ့ပေါ့။
၁၀။ ထိပြီး နှုတ်ဆက်ပါ – အထိအတွေ့ဟာ လူကိုရင်းနှီုးမှုပေးပါတယ်။ ပြန်ခါနီး လက်မောင်း၊ ပုခုံး စတာတွေကို ပုတ်/ထိပြီး နှုတ်ဆက်တော့ မြန်မာ့ယဉ်ကျေးမှုအတိုင်းအတာနဲ့လက်ခံနိုင်တဲ့ အထိအတွေ့ကိုရရှိစေမှာပါ။
မိန်းကလေးတိုင်း တောင့်တပြီး ယောက်ျားလေးတိုင်း အားကျစေဖို့
အောငျမွငျသော 1st Date အတှကျ အခကျြ ၁၀ ခကျြ
ခြိနျးတှရေ့ငျလုပျရမယျ့ အရာတဈခြို့ဟာ သိပွီးသားတှပေါပဲ။ ဥပမာ မိနျးကလေး ၉၅% လောကျ သူတို့ ရုပျရညျကို ခညျြးမှနျးစခေငျြပါတယျ။ ဒီလုိုပဲ ခြိနျးတှတေဲ့နမှေ့ာ ဖုနျးဆကျပွီး နရောနဲ့ အခြိနျ သတိပေးတာကို လိုခငျြပွီး စားသမြှကို လညျးယောကျြားလေးက ရှငျးပေးစခေငျြပါတယျ။ ဒါပမေယျ့ စားသောကျဆိုငျရှေးခယျြမှု ၊ရှပျအကငြ်ျီအရောငျ စတဲ့ အခွားသောအရာမြားစှာက သငျနောကျထပျ ခြိနျးတှခှေ့ငျ့ ရှိမရှိကို အဆုံးအဖွတျပေးနိုငျပါတယျ။
၁။ ရှပျအကြီ ရဲ့အစှမျး – ရှပျဝတျထားတဲ့လူက ရငျ့ကွပျထကျမွတျ တယျထငျရပွီး အမြိုးသမီးမြားလှနျစှာသဘောကပြါတယျ။
၂။ နသောတဲ့နေ ရှေးပါ – မိနျးခလေးမြားဟာ ရာသီဥတုသာယာနရေငျ ခြိနျးတှတေ့ာကို ပိုမို လကျခံတကျကွပါတယျ။ မိုးအုပျနတေဲ့နတှေ့ကေို ရှောငျပွီး ခြိနျးဖို့ပွောပါ။
၃။ စကားသံကို နားထောငျပါ – သူမက စကားကယျြကယျြပွောတကျတယျ . ပွတျပွတျပွောတကျတယျဆိုရငျ ပှငျ့လငျးသူမို့ လူအမြားကွားမှာသှားရတဲ့ ပနျးခွံတို့ . ရှော့ပငျစငျတာတို့မှာခြိနျးပါ။
သူက စကားဖွေးဖွေးပွောတယျ၊ အေးအေးလေးနတေကျတယျဆို ရငျ သူကရှကျတကျသူမို့ လူမရှုပျတဲ့ ကျောဖီဆိုငျတို့၊ ရုပျရှငျရုံတို့မှာခြိနျးပါ။
၄။ ခမျးနားသော နရော – အမိုးနိမျ့သောနရောမြားကို ရှောငျပါ။ သူမကို စိတျကညျြးကပျြစပွေီး ပှငျ့လငျးစှာပွောဆိုရနျ ခကျခဲစပေါတယျ။ ခောငျမွငျ့သောနရောမြား က လူရဲ့စိတျကိုလှပျလပျမှုပေးတဲ့ အတှကျ သူမ လှပျလပျစှာ ပွောဆို ဆကျဆံနိုငျမှာပါ။
၅။ မှနျသော မေးခှနျးမေးပါ – “ပွညျတှငျးပွညျပ ဘယျတှေ လြှောကျလညျဖူးသလဲ”
“သရဲကား ကွိုကျလား” နဲ့ “ရှေးခယျြခှငျ့ ရှိမယျဆို ဘယျနိုငျငံ ဘယျမွို့မှာ နခေငျြသလဲ” စတဲ့မေးခှနျးတှကေို အရံအနနေဲ့ထားပါ။
၆။ ကိုယျရေးကိုယျတာ နဲနဲပဲပွောပါ – သူပွောတာအကုနျနားထောငျ ခောငျးညိတျနတောထကျ ကိုယျ မိဘအကွောငျး . ကိုယျ့ အလုပျအကွောငျးနဲနဲ ပွောပေးပါ။ သူ့အကွောငျး ကိုယျ့အကွောငျး ဆကျစပျမိအောငျလို့ပါ။ သူလညျးကွုံနရေတာကို ရှေးပွောပါ။ ဒါမှ သူ နဲ့ကိုယျ ဖွဈစဉျ တူတယျဖွဈပွီး စိတျထဲကနျြခဲ့မှာပါ။
၇။ အရမျးဂရုမစိုကျပါနဲ့ – အစပိုငျး ဂရုအရမျးစိုကျပွရငျ မိနျးကလေးတှကေ သိပျပိုတယျထငျပွီး မကွိုကျတော့ပါဘူး။ ကိုယျ့အပွုအမူ ကိုယျပဲ ထိနျးထားပါ။ ပိုခငျြရငျ နောကျမှ ပိုလို့ရတယျ. မဟုတျရငျ ကိုယျပဲ သူ့အတှကျ လူပိုဖွဈသှားမယျ။
၈။ ဖုနျးမသုံးပါနဲ့ – ဖုနျးသုံးခွငျးအားဖွငျ့ သူနဲ့ စကားပွောမယျ့အခြိနျတှေ ကိုဖွုနျးတီးရာရောကျတဲ့အပွငျ သူ့ကိုလညျး အလေးမပေးရာရောကျတဲ့အတှကျ ဖုနျးကို အိပျကပျထဲသိမျးထားပါ။
၉ ။ ဖွတျပွီးပွောပါ – သူစကားကို ဖွတျခိုငျးတာမဟုတျပါဘူး။ သူစကားပွောတာကို ဝငျထောကျခံပေးတာကိုပွောတာ။ နားထောငျနရေုံနဲ့ သူပွောသှားတာ ပဲရှိမယျ. သငျဂရုတစုိုကျနားထောငျနတောသိအောငျ ဖွတျဖွတျပွီး နားလညျကွောငျးပွောပါ။ ရှဲ့သလိုဖွဈသှားအောငျ ခဏခဏတော့မလုပျနဲ့ပေါ့။
၁၀။ ထိပွီး နှုတျဆကျပါ – အထိအတှဟေ့ာ လူကိုရငျးနှီုးမှုပေးပါတယျ။ ပွနျခါနီး လကျမောငျး၊ ပုခုံး စတာတှကေို ပုတျ/ထိပွီး နှုတျဆကျတော့ မွနျမာ့ယဉျကြေးမှုအတိုငျးအတာနဲ့လကျခံနိုငျတဲ့ အထိအတှကေို့ရရှိစမှောပါ။
Previous: ကိုယ့်ဘဝကို အဆုံးအဖြတ်ပေးမယ့် အဝတ်အစား
Next: ဘူကောင်တွေနဲ့ ဘယ်လို ဆက်ဆံရမလဲ